Soraty: ny fanitarana mba hahatsiarovanao ny toerana nijanonanao tamin'ny tranokala | Vaovao momba ny gadget
Tsarovy ny toerana nijanonanao tamin'ny tranokala miaraka amin'i Scrroll In
Eder Esteban | | fampiharana, General
Google Chrome dia mpizaha tranonkala izay misy safidy maro azo ampiasaina. Ny ankamaroan'ireo fanitarana ireo dia manamora ny fiainantsika, mamela ny fampiasana browser vaovao kokoa. Ny hetsika ataontsika matetika rehefa mamaky amin'ny pejin-tranonkala isika dia ny mikorisa (misosa). Na dia misy fotoana aza adinontsika ny toerana nijanonantsika. Amin'ity toe-javatra ity dia misy ny fanitarana antsoina hoe Scrroll In.
Mety ho toa zavatra toa azy ny sasany aminareo Scrroll In. Ity fanitarana ity dia mahazo vahana eo amin'ireo mpampiasa ao amin'ny Google Chrome. Misaotra azy tsy hohadinoinay intsony ny toerana nijanonantsika Amin'ny tranokala. Amin'izany no ahafahantsika manohy mamaky ny toerana nisy antsika.
1 Soraty: Inona izany ary ny fomba fiasan'izy io
2 Ahoana ny fananana ity fanitarana ity
3 Ahoana ny fampiasana Scrroll In ao amin'ny Google Chrome
Soraty: Inona izany ary ny fomba fiasan'izy io
Scrroll In dia fanitarana mifanaraka amin'ny Google Chrome. Ny tena asany dia ny Tehirizo amin'ny pejy web nijanonanay ny teboka tena izy na hoe hatraiza no nahatongavantsika tamin'ny fihodinana. Amin'izany fomba izany, rehefa te-hiverina amin'ity tranonkala ity isika dia hoentina amin'io teboka io ihany ary afaka manohy mamaky ara-dalàna ao amin'ity tranonkala ity.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ity fanitarana ity dia ny hoe hiasa mihitsy aza na dia nanidy an'io pejin-tranonkala io aza izahay. Raha nanakatona tranokala ianao, saingy rehefa afaka kelikely dia ampidirinao indray izy io, Scrroll In dia hitondra antsika any amin'ny toerana nijanonantsika tamin'izany fotoana izany. Ka afaka manohy mamaky ara-dalàna isika. Ity endri-javatra ity dia zavatra iray izay mahatonga ny fanitarana hahafinaritra indrindra ho an'ireo mpampiasa.
Na dia izany aza manana ny fetra izay tsy azontsika hanakatona ny Google Chrome. Raha manidy ny navigateur isika amin'ny fotoana sasany dia ho very ny fandrosoana nataontsika ary ny teboka nijanonantsika tao amin'io tranonkala io dia tsy ho voavonjy intsony. Izy io dia lafiny iray tokony hikajiana rehefa hampiasa azy io amin'ny tranga misy antsika. Fa raha tsy izany dia tsy mampiseho olana amin'ny fampiasana amin'ny ankapobeny.
Ahoana ny fananana ity fanitarana ity
Raha te hanana Scrroll In ao amin'ny tranokalanao ianao, dia tsotra ny dingana. Satria toy ny mitranga amin'ny fanitarana rehetra hitantsika amin'ny Google Chrome, Azontsika atao ny misintona azy avy amin'ny magazay fanitarana avy amin'ny browser Google. Mila mitady azy ao amin'ny magazay voalaza fotsiny isika. Fa raha tianao ny fomba haingana indrindra, azonao atao ny mampiditra an'ity rohy ity hiditra mivantana.
Toy ny mahazatra, maimaim-poana ny fampidinana an'io fanitarana io ao amin'ny browser. Noho izany dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra manga ianao raha te hanampy an'i Google Chrome ary afaka segondra vitsy dia hanana Scrroll In ianao amin'ny fomba mahazatra ao anaty tranokala. Ho hitanao fa amin'ny ilany ankavanana ambony dia azonao ny kisary an'io.
Sainan'ny volondavenona izy io, izay manondro fa ny extension dia efa miasa ao amin'ny browser. Ka rehefa vitantsika ity dingana fametrahana ity dia afaka manomboka mampiasa azy io amin'ny Google Chrome amin'ny pejin-tranonkala rehetra izay hojerentsika izahay.
Ahoana ny fampiasana Scrroll In ao amin'ny Google Chrome
Raha vantany vao tafapetraka ary rehefa mahita ny kisary fanitarana isika dia efa afaka mampiasa azy io amin'ny navigateur amin'ny fotoana rehetra. Ny fiasan'io dia tsy mampiseho fahasarotana be loatra. Rehefa mizaha na mamaky amin'ny pejy misy lahatsoratra marobe ianao, saingy mijanona amin'ny fotoana iray ary te hamaky ny ambiny aoriana, avy eo ianao dia mila tsindrio ny kisary Scrroll In hita eo ankavanan'ny efijery.
Hamela antsika hitahiry an'ity hevitra ity izay nijanonantsika fony namaky ity pejy ity izahay. Azontsika atao ny manidy ity tranokala ity, raha ohatra ka hiala isika na tsy te hampiasa azy io amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana hiverenantsika amin'ilay tranonkala voalaza izao dia afaka miverina amin'ity teboka nitoerantsika ity isika.
Rehefa miditra ao amin'ilay tranonkala ianao, ho hitanao fa mena ny sary famantarana Scrroll In, izay midika fa nitahiry teboka nijanonana teto amin'ity pejy ity izahay. Noho izany, raha tsindrio ny kisary fanitarana dia hahazo safidy maromaro isika. Ny iray amin'izy ireo dia ny Fetch Scroll, izay mahaliana antsika. Hatramin'ny fikitihana azy io dia mitondra antsika any amin'ny toerana tena nijanonantsika teto amin'ity pejy ity. Ka ho afaka hanohy hamaky ara-dalàna amin'ny fotoana rehetra isika.
Raha amin'ny fotoana iray dia vitantsika ny mamaky an'ity tranonkala ity, afaka manala ireo marika ireo izahay izay noforoninay niaraka tamin'ny fanitarana. Amin'ny alàlan'ny fanindriana indray mandeha eo amin'ny kisary Scrroll In, dia hitantsika fa misy safidy Delete. Afaka mampiasa azy io isika rehefa tsy te-hamonjy io teboka io intsony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tsarovy ny toerana nijanonanao tamin'ny tranokala miaraka amin'i Scrroll In
Sony dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny PlayStation 5 vaovao
Efa misy MacOS Catalina: inona no vaovao ary ahoana ny fametrahana azy